» Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Magaalada London ee dalka Ingiriiska (Sawirro)
Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Magaalada London ee dalka Ingiriiska (Sawirro)
February 1, 2013 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareXasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa gaaray Magaalada London ee caasimda dalka Ingiriiska.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kadagay garoonka diyaaradaha ee Magaalada London waxa socdaalka uu ku tagay halkaasi ku wehliya Wasiirka Arrimaha Dibadaba, Lataliyayaal iyo xubno kale oo ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka London safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya iyo madax kale.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in uu la kulmo Madaxda dalkaasi gaar ahaan Dived Camron, waxaana uu kala hadli doonaa arrimaha Soomaaliya iyo sidii dowladda Soomaali loo taageeri lahaa.
Waxaa kaloo la filayaa in Madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlo Dived Camron Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska shir lafilayo in uu ka furmo Magaalada London kaasi oo ay horay isugu afgarteen Wasiirada arrimaha dibada labada dal.
Booqashada Madaxweynaha uu ku tagay Ingiriiska ayaa daba socotay markii uu soo dhameystay socdaal uu ku tagay Magaalada Brussels ee dalka Buljimka halkaasi oo uu kula kulmay madax ka tirsan hogaanka Ururka Midowga Yurub.
4 Responses to Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Magaalada London ee dalka Ingiriiska (Sawirro)
cabdiqaadir Xasan says:	February 1, 2013 at 12:11	Kakakakakakakakakakak Kakakakakakak Kkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Somaliland Maxa ku dhacay somaliya iyo Somaliland Waa iisku med
Reply	Sible faqacumar says:	February 3, 2013 at 01:35	Maxad ku qosli ilka laf ku dire. somaaalilaaand iyo somaaliyaaaa wa iskumiiiin.ala ti kudashey weykugu qasartey,xiligan waxey isledahay wilkeyga aweey? Kkkkkkkk
Reply	Maryan says:	February 2, 2013 at 06:39	Kkkkkkkkk wa run cabdiqadir
Reply	Maryan says:	February 2, 2013 at 06:41	Cabdiqadir makase xafada malesia hadad kaseso ishek wakubarya